Sambava: Niafara tamin’ny fampiasan-kery ny fisantarana ny fanorenana “Gare routière »
Fisamborana narahina herisetra no nasetrin’ny Kaominina Sambava ireo mponina tao amin’ny Opération café Ambarimiambana nanohitra ny fandroahana azy ireo amin’ny tany, 8ha, misy ny toeram-ponenany mba hanorenana « Gare routière ».
Tafapetraka androany ihany moa ny vato fehizoro mariky ny fanombohan’ny foto-drafitrasa.
Raha tsiahivina moa dia namoaka taratasy fanomezan-dalana ny Kaominina hanorina Toby fiantsonan'ny fiarakodia ny fanjakana, taratasy nosoniavin'i Rivo Rakotovao fony izy minisitry ny fambolena ny 3 oktobra 2017.
Tanin'ny sampandraharahan'ny fambolena faritra SAVA (DRAE SAVA) izy io.
Vao nahazo ny taratasy ny Kaominina dia nampiomana ireo mpiasa misotro ronono miorim-ponenana amin'ilay toerana voatondro mba hiala, hanombohana ny asa fanorenana izay napetraka hanomboka ny alatsinainy 22 janoary.
Milaza kosa ny avy amin'ny DRAE SAVA fa tsy hajain'ny Kaominina ny votoatin'ny taratasy fanomezan-dalana izay milaza ny tokony hisian'ny fifanantonana mialoha hifandaminan'ny roa tonta.